Gabar Jaamacadeed Oo Xadgudub loo geystay Ka dib markii ay Sameysay…. | Xaqiiqonews
Gabar Jaamacadeed Oo Xadgudub loo geystay Ka dib markii ay Sameysay….
Warar hoose oo ay heshay shabakadda baahisa wararka qarsoon xaqiiqonews ayaa sheegaya in luul osmaan ahmed oo ka tirsan aradayada jaamacadda muqdisho ay la kulantay xadgudub aad u fool xun oo u geyteen goox dhalinyarro ah.
Xadgudubka gabadha loo geystay ayaa dhacay ka dib markii luul ay isku dayday in ay sawir ka qaato dood dhaxmareysay dhalinyarrada arintaasi oo keentay in wiilasha dhalinyarrada ah si aan kala har laheen ay dhulka ugu jiidaan gabadha oo ku jirtay sanadkii seddexaad ee jaamacadda.
Ilo wareedyo ku sugan jaamacadda ayaa u xaqiijiyey xaqiiqonews in dhacdadani foosha xun ay ka dhacday jaamacadda muqdisho subaxnimadii sabtida ee la soo dhaafay.
Arintani ayaa muran weyn ka dhax dhalisay gudaha jaamacadda inkastoo markii danbe si hoose arinta loo xalliyey .
Dhank kale araday dhigta jaamacadda muqdisho ayaa soo galiyey facebook qoraal uu kula hadlaayo waalidiinta gabdhahooda ay dhigtaan jamacadda muqdisho walow markii danbe ardaygaasi lagu qasbay in uu qoraalkaasi ka bixiyo boggiisa facebook.
Halkan hoose ka daawo qeyb qoraalka ka tirsan oo xaqiiqonews ay sawir ka qaadatay inta aan qoraalka la bixin